မြန်မာ့လက်ဝှေ့က ပိုစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့မွေထိုင်းချန်ပီယံနှင့် အွန်လိုင်းအမေးအဖြေ
မြန်မာ့လက်ဝှေ့ကို ကမ္ဘာက သိအောင် သယ်ဆောင်ပေးချင်တယ်လို့လည်း တိုဘီဘင်ဒန်က စိတ်ကူး ထားကြောင်း ပြောလာပါတယ်။
ကမ္ဘာ့လက်ဝှေ့ချန်ပီယံရှစ်(WLC)က စာချုပ်ချုပ်ဆို ခေါ်ယူလိုက်တဲ့ WBC မွေထိုင်း ချန်ပီယံ တိုဘီဘင်ဒန်ကို DuwunSportsက အွန်လိုင်းကတဆင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားသည်များကို ပရိသတ်တွေ အတွက် ပြန်လည် ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ WLC နဲ့ လက်တွဲဖို့ ဘာကြောင့် ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလဲ?
ဖြေ။ WCLက ကမ္ဘာအနှံ့ ပျံ့နှံ့မှုရှိတဲ့ ကြီးမားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပါ၊ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာ UFC ပွဲတွေ ပြသလျက်ရှိ တယ်။WLCက ပွဲတွေက တကယ်ကို ကြီးကျယ်ခမ်းနားပါတယ်။
၂။ မြန်မာ့လက်ဝှေ့မှာ အောင်မြင်မယ်လို့ ယုံကြည်လား?
ဖြေ။ တကယ်ကို WLC မှာ အောင်မြင်မယ်လို့ ယုံကြည်မှု အပြည့်ရှိပါတယ်။ ရိုးရာလက်ဝှေ့ကို လေ့လာမယ်၊သင်ယူ မယ်၊အမှန်တကယ် လက်ဝှေ့ပညာရပ်ကို ဆည်းပူးမယ်။ ဒီအတွက် စိတ်ဓာတ်ခွန်အားအပြည့်ရှိပြီးသားပါ။
၃။ မြန်မာ့လက်ဝှေ့နဲ့မွေထိုင်းကြား ဘာတွေ ကွာတယ်ထင်လဲ?
ဖြေ။ သတ်ကိုးသတ်မောင်းကိုးမောင်းနဲ့ လက်ဝှေ့မပါတဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာလက်ဝှေ့က ပိုပြီး စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ ကောင်းပါ တယ်။ မွေထိုင်းလည်း မိုက်ပါတယ် ဒါပေမယ့် မြန်မာ့ရိုးရာလက်ဝှေ့နဲ့ နည်းနည်းတော့ ကွာတယ်၊လက်ဝှေ့ကတော့ ပိုပြီး လွတ်လပ်တယ်၊နောက်ပြီး အခု WLCကလည်း စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အစီအစဥ်တွေရှိပါတယ်။
၄။ အကြိုက်ဆုံး မြန်မာ လက်ဝှေ့သမားရှိလား၊ဘာကြောင့် ကြိုက်တာလဲ?
ဖြေ။ မြန်မာဖိုက်တာတွေက တကယ် အံ့မခန်းတွေပါပဲ။ဒီအထဲမှာမှ စိုးလင်းဦးထိုးသတ်ပွဲတွေမှာဆိုရင် ပြင်းပြင်း ထန်ထန် ထိုးသတ်တာတွေ မြင်ရဖူးတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ် မြန်မာ့ရိုးရာလက်ဝှေ့ကို ကြည့်ရတာကိုက ပျော်ရွှင်မိတာ ပါ။
၅။ ပထမဆုံးပွဲ ဘယ်တော့ ဖြစ်မယ်ထင်လဲ?
ဖြေ။ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော့် ပထမဆုံးပွဲကို တကယ် စောင့်နေပါတယ်။ ကျွန်တော့် ပထမဆုံးပွဲကို ကျွန်တော်သိတာနဲ့ တပြိုင်နက်တည်း အားလုံးလည်း သိရစေမှာပါ။ဒါကြောင့် ကျွန်တော့် အင်စတာဂရမ်ဖြစ်တဲ့ @tobybindonနဲ့ @worldlethwei တို့ကို Like လုပ်ပြီး စောင့်မျှော်နေစချင်ပါတယ်။
၆။ ဘယ်မြန်မာဖိုက်တာနဲ့ ထိုးသတ်ချင်တာရှိလဲ?
ဖြေ။ မြန်မာ့ရိုးရာလက်ဝှေ့သမားအားလုံးကို ကျွန်တော် လေးစားပါတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ် WLCက စီစဥ်တဲ့ ဘယ်တွဲဆိုင်းမဆို ကျွန်တော် လက်ခံ ထိုးသတ်ဖို့ အဆင်သင့်ပါပဲ။
၇။ ရိုးရာလက်ဝှေ့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရည်မှန်းချက်၊မျှော်လင့်ချက်တွေက ဘာတွေ ဖြစ်မလဲ?
ဖြေ။ စစ်မှန်တဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာလက်ဝှေ့ပုံစံနဲ့ ကိုယ်စားပြုနိုင်အောင် ကျွန်တော် ကြိုးစားမှာပါ။ မြန်မာ့ရိုးရာလက်ဝှေ့ယဥ်ကျေးမှုတွေကို ကမ္ဘာသိအောင်လည်း သယ်ဆောင်သွားမှာပါ။
၈။ WLC ချန်ပီယံတွေက နိုင်ငံခြားသားတွေပဲ ဖြစ်နေတဲ့အပေါ်ရော ဘယ်လိုမြင်လဲ?
ဖြေ။ တကယ်တော့ ဒါက တိုက်ပွဲတစ်ခုလိုပဲ ဖြစ်လို့ အရာအားလုံး ဖြစ်နိုင်တယ်လေ။သေချာတာကတော့ အခုချိန် မှာ မြန်မာ့လက်ဝှေ့ ပညာရပ်ကို နိုင်ငံခြားသားတွေ ပြင်းပြင်းထန်ထန်လေ့ကျင့်နေကြပြီ ဖြစ်သလို ဂရုတစိုက်လည်း လေ့လာနေကြပါပြီ။
၉။ မြန်မာ့ရိုးရာ လက်ဝှေ့ပရိသတ်တွေကို ပြောချင်တဲ့ စကား?
ဖြေ။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ မြန်မာပရိသတ်တွေကို ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ကျွန်တော့်ကို လိုလိုလားလား ကြိုဆို ကြတာကို သတင်းစကားတွေ ရပါတယ်။ ဒီအတွက်လည်း အင်မတန် အံ့အားသင့်ရသလို မြန်မာကို လာဖို့လည်း မစောင့်နိုင်တော့ပါဘူး။ ကတိပေးနိုင်တာက ကျွန်တော် မြန်မာပရိသတ်တွေအတွက် အကောင်းဆုံး တိုက်ခိုက် မှာဖြစ်ပြီး အားလုံးကို အရမ်းချစ်ပါတယ်။
တိုဘီဘင်ဒန်က ဗြိတိန် စူပါမစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း ချန်ပီယံ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး အသက် ၂၆ နှစ်သာ ရှိပါသေးတယ်။ နောက်ဆုံး ထိုးသတ်ထားတဲ့ ၉ ပွဲမှာ ၇ ပွဲကို အလဲထိုးအနိုင်ယူထားနိုင်ပြီး အတိုးတက်ဆုံး လက်ဝှေ့ ဖိုက်တာ တစ်ဦးအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း ခံထားရသူပါ။
WLC နဲ့ ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်အရ လိုက်မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းမှာ ကစားမယ်လို့သိရပြီး လိုက်မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း လက်ရှိ ချန်ပီယံက ဆာရှာမွိုင်ဆာ ဖြစ်ပြီး မြန်မာ လက်ဝှေ့သမား သွေးသစ်ဝင်းလှိုင်နဲ့ ချန်ပီယံဟောင်း အာသာ ဆာလာ ဒိုက်တို့လည်း ရှိနေပါတယ်။